UKWELASHWA NGAPHANDLE nezinamathiselo
Yephrothokholi ngempumelelo okuyiwona awudingi ukusebenzisa asizayo okubambelela systems displacements zamazinyo.
Bhalisa endaweni agodliwe yezokwelapha futhi iqala lokuqeqesha ngevidiyo inkambo yethu,.
ISIQINISEKISO OF UKWELASHWA
Isethaphu futhi khulula buso uma kokuqeda ukwelashwa yokuqedela noma uma yokulahlekelwa noma ukwa imaskhi.
Ungathumela izithombe izinyathelo ukuze uhlale etholakala inombolo yocingo yethu futhi uthole izimpendulo zayo yonke imibuzo yakho ku izinga okufanayo, okuzokwenza zingalawulwa on lesinqumo high qapha oqondile; ngenkathi isiguli namanje cwaningo.
USIZO UKWETHULWA KANYE POST PRODUCTION
Isethaphu con isiqophi, lesisho, valet njalo khulula. Singabantu iyatholakala nganoma yisiphi ngxabano phakathi ngentuthuko icala.
Kit FOR UKUKHANGISA KWAMAHHOLO OF UKUBUKEKA
Chofoza lapha futhi ucele incwajana khulula kuletha etafuleni noma phansi, amavidiyo ulwazi nezincwajana iziguli zakho.
UKWELASHWA OKWENGEZIWE’ ESINEMBILE KANYE FAST NGAPHANDLE okunamathiselwe Buso NE ultra esobala
Biomechanics lwenteke ngesethi kabili aligners EZENGEZIWE UP no UP ukudlulisa ukukhanya namabutho njalo at zonke sinyathelo futhi ingcindezi amaphuzu (DIVOT) Umkhaya’ eyenziwe yinkampani ukunciphisa zonke criticality buso aligners mono. Nge extrusions futhi rotations ngaphandle okunamathiselwe. Futhi buso smooth xaxa nokungokwempilo nge ukuhambisana kangcono nesineke, sibonga "Smile Glass" ubuchwepheshe.